လူမျိုးသွေးကြီးဝါဒကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မတွန်းလှန်နိုင်ပါလျှင် …. | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeလူမျိုးသွေးကြီးဝါဒကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မတွန်းလှန်နိုင်ပါလျှင် ….
လူမျိုးသွေးကြီးဝါဒကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မတွန်းလှန်နိုင်ပါလျှင် ….
ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၇ M-Media
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသုံးတော်ခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
– မြန်မာရဲတွေက လက်နက်မဲ့အမျိုးသားတွေကို ရိုက်နှက်နေကြတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်ကို ဇန္န၀ါရီလဆန်းပိုင်း ရောက်လာပြီး ကမ္ဘာကစောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အာဏာပိုင်များက ကျူးလွန်သူလေးဦးကို အမြန်အဆန် ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
လက်နက်မဲ့အနှိပ်စက်ခံများကတော့ အစိုးရရဲ့နှိပ်စက်မှုကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စ်လင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနည်းစုဝင်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အနိဌာရုံများအပေါ် အစိုးရရဲ့အလေးမထားမှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသုံးတော်ခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက ထုံးစံအတိုင်း မပြတ်ဝေဖန်လာပါတော့တယ်။ သူမဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီသင်္ကေတ ဖြစ်နေသော်လည်း
ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်က ရွာသားများအဖို့ ဒီလိုအကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ မစိမ်းကြပါဘူး။ ဗီဒီယိုထဲ ပုံဖော်ထားချက်က ထူးခြားမှု မရှိပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုရင် ဒီလို ဆက်ဆံခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး သက်ရောက်ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ ပြည့်ဖြိုးသွင်နဲ့ တေဇာလင်း အမည်ရှိ ရဲအရာရှိနှစ်ဦးက ရိုဟင်ဂျာရွာသားများအနက် မြေပြင်ပေါ် မလှုပ်မယှက်ထိုင်နေတဲ့ လက်နက်မဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကို ဆတ်ကနဲဆွဲယူကန်ကြောက်ပုံဟာ ဗီဒီယိုထဲ အရှင်းသားတွေ့မြင်ရတယ်။ နောက်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇော်မျိုးထိုက်ကတော့ သွေးအေးစွာ စီးကရက်ကို ဖွာရှိုက်ရင်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေသလို ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိ ရဲထွန်းနိုင်ကလည်း ဒီလုပ်ရပ်များအပေါ် ကြီးကြပ်စီမံနေခဲ့တယ်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီအရာရှိလေးဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးနောက် သူတို့ကို ပြစ်ဒဏ်စီရင်ရမယ်လို့ ဒေါ်စုကြည်က ပြောဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီကိစ္စမျိုး ရှေ့ဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်စုကြည်ဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကို လည်စင်းခံရဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက ဖိဖိစီးစီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဋ္ဌေးက နေပြည်တော်မှာ သတင်းထောက်တွေကို အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့တယ်။
နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ရှိနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ လူမျိုးသုဉ်းရှင်းလင်းမှုအဖြစ် အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင် ရေးသားပြီးနောက်မှာပင်လျှင် အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ လောက်လောက်လားလား အလေးထားမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဦးစားပေးအလေးထားမှု မခံရပါဘူး။ သူတို့ထဲက လူအမြောက်အများကလည်း နိုင်ငံသားအဖြစ်ပင်လျှင် အသိအမှတ်ပြု မခံရပါဘူး။
ဒေါ်စုကြည်ဟာ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် အားပေးစာနာမှုကို ပြသမှု မရှိတာကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဝေဖန်နေခြင်းဟာ လွန်တယ်လို့ ဆိုမရနိုင်ပေဘူး။ သူမ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နိုင်ငံရေးအဖိနှိပ်ခံဘ၀ ရောက်ခဲ့ပါလျက် ဘာကြောင့် တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းမဲ့နေရသလဲဆိုတဲ့အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာအချို့ဖြစ်လာပါတယ်။ သို့တစေ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များတစ်လျှောက် သူမအပေါ် အရေးယူဖိနှိပ်မှုဟာ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် အခြေခံတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ လူမျိုးဖြစ်တည်မှုအပေါ် အခြေခံခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူမရဲ့လူမျိုး ဗမာများဟာ အခွင့်ထူးခံများဖြစ်နေကြောင်း သူမက လက်မခံနိုင်တာကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဝင်များရဲ့အရေးဟာလည်း လျစ်လျူရှုခံနေရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဗမာလူမျိုးတွေ ကြီးစိုးနေကြပြီး တိုင်းပြည့်လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံအထိ ရှိတယ်။ လူများစုဖြစ်ခြင်းအပေါ်မူတည်လို့ ဗမာလူမျိုးများက အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားတစ်ရပ် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ လူများစုဝင်တွေသာ အကျိုးခံစားနေရပြီး လူနည်းစုဝင်တွေရဲ့အနိဌာရုံများမှာတော့ အလေးထားမခံရကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လူမျိုးရေးဆိုတဲ့ မျက်မှန်စိမ်းတပ်အမြင်တွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတယ်။ သို့သော် ဒေါ်စုကြည်က ဒီအချက်ကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ထုတ် သူမရဲ့ ‘Freedom from Fear’ စာအုပ်ထဲမှာ သူမရဲ့မိန့်ခွန်းဟောင်းများကို တစေ့တစောင်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုက်ပါလေ။ တစ်ချိန်က သူမ ဒီလို ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
“ငါဟာ ကချင်၊ ငါဟာ ဗမာ၊ ငါဟာ ရှမ်း ဆိုပြီး သဘောထားမျိုး မရှိရပါဘူ။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ သွေးသောက်ရောင်းရင်းတွေ ဆိုတဲ့ သဘောထားရှိရပါမယ်။ ဒါမှသာလျှင် ကျွန်မတို့ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့များ ကျွန်မတို့အချင်းချင်း လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားနေကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒီိမိုကရေစီရရှိနိုင်ဖို့ အချိန်ကြာညောင်းသွားပါလိမ့်မယ်”။
ဒါဟာ အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ အတွေးအမြင်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးရေးအခြေပြု အကွက်စေ့စေ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများအဖို့တော့ လူမျိုးရေးဆိုတာ အဓိကကျတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
အခွင့်ထူးခံတွေအပေါ် ထင်တိုင်းကြဲခွင့်ပေးနေခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲတစ်လျှောက်လုံး လူများစုရဲ့ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးရေးကို ခွင့်ပြုရာရောက်နေပါတယ်။ ဗမာလူမျိုး အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုတွေ ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့အမျှ ဗမာလူမျိုးမကြီးစိုးတဲ့နယ်မြေတွေထဲ စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေက မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဗမာလူမျိုးတွေကို နေရာပေးလေလေ လူနည်းစုဝင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ရှုံ့ကျုံ့သွားလေ ဖြစ်နေပါတယ်။
အခွင့်ထူးခံလူတန်းစား ရှိနေကြောင်း လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခြင်း မရှိသရွေ့ လူမျိုးသွေးကြီးဝါဒလည်း အဆုံးသတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗမာလူမျိုးတွေ ထင်ရာစိုင်းနေသမျှကာလပတ်လုံး လူနည်းစုဝင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ဆက်လက်ပြီး ဒုက္ခခံစားနေရပါဦးမယ်။ အမေရိကမှာ လူဖြူတွေက အခွင့်ထူးခံ ဖြစ်နေသလိုမျိုး ဒီအရှေ့တောင်အာရှဒေသနိုင်ငံအတွင်း ဗမာလူမျိုးက အခွင့်ထူးခံလူတန်းစား ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
လူမျိုးရေးကိစ္စအပေါ် ဒေါ်စုကြည်က ရှေ့ဆက် လျစ်လျူရှုနေဦးမယ်၊ ဗမာလူမျိုးတွေကိုသာ အလွန်အကျွံ ရှေ့တန်းတင်နေဦးမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အမည်ခံရွှေရည်စိမ်သက်သက်သာ ဖြစ်နေတော့မှာပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ သူမအနေနဲ့ လူနည်းစုဝင်တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ကျရောက်နေတဲ့ လူမျိုးသွေးကြီးဝါဒကို မဖြစ်မနေ နိဂုံးချုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သို့ပင်သို့ငြား ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ လူမျိုးအမည်ကို အသုံးပြုဖို့ သူမက ငြင်းဆိုနေတာကို ကြည့်ရင် လူမျိုးရေးသွေးစည်းမှုကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မယ့် အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ကို စောင့်မျှော်နေဖို့သာ ကျန်ရှိပါကြောင်း။
မူရင်း – Racism and the Burman privilege: Why Suu Kyi’s government deserves no praise By Matthew Abbey; Asian Correspondent
ပြန်ဆိုသူ – Myintmo Maung Maung
မှတ်ချက်။ မူရင်းရေးသားသူ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်သာဖြစ်ပြီး Asian Correspondent နှင့် M-Media တို့၏ အာဘော်များ မဟုတ်ပါ။
← လက်ရှိအစိုးရကို လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် အစ္စလာမ်တွေရဲ့အခြေအနေကို တရားဝင်လမ်းကြောင်းအတိုင်း တိုင်တန်းအသိပေး
Racism and the Burman privilege: Why Suu Kyi’s government deserves no praise →